Waa kuma Abuu Mansuur maxay se ka dhigan tahay isu soo dhiibitaankiisa? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Waa kuma Abuu Mansuur maxay se ka dhigan tahay isu soo dhiibitaankiisa?
Waa kuma Abuu Mansuur maxay se ka dhigan tahay isu soo dhiibitaankiisa?
Mid ka mid ah hoggaamiyeyaashii ugu caansanaa kooxda al-Shabaab Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ku magic dheer ayaa isu soo dhiibay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya
Mukhtaar,iyo rag ka mid ah dagaalyahnadiisa ayaa shalay oo Axad ahayd waxaa ay soo gaareen Magaalada Xudur oo xarun u ah gobalka Bakool ee Koonfur galbeed Soomaaliya.
Waxaa la sheegay in Mukhaar diyaarad khaas ah oo ay la socdeen wasiirka Gaashaandhiga dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullahi Maxamed iyo taliye ku xigeenka hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Qaranka ee [NISA] ka soo qaaday Magaalada Xudur isagoo la keenay magaalada Muqdishu.
Ciidamo ka tirsan Nabad-sugidda ayaa la wareegay amaanka Wadaadka oo la sheegay in la geeyay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ee Magaalada Muqdishu.
Haddaba waa kuma abuu Mansuur?
Roboow Abuu Masnuur, ayaa waxaa uu 10-ka bishii October ee sanadkii 1969-kii uu ku dhashay magaalladda Xudur ee caasimada Gobolka Bakool ee Soomaaliya.
Waxaa uu kutubo ka raacan jiray masjidyo ku yaalla magaalladda Muqdishu, halkaas oo uu sidoo kale uu ku noolaa. Sanadkii 1990-kii ayuu Islamic Law uu ka soo bartay jaamacadda Univetsity of Khartoum ee dalka Sudan.
Roboow, ayaa markii dambe kusoo noqday magaalladda Muqdishu waxaana uu la shaqa bilaabay hay’ad la yirahdo Saudi Al-Hamamain Foundation.
Sheekh Mukhtar Robow wuxuu ka mid yahay aasaasayaashii kooxda al-Shabaab oo la aas-aasay ka dib wixii ka dambeeyay markii Roobow iyo Xubno kale oo ka soo dagaalamay Afghanistan ay ku soo laabteen dalka Soomaaliya.
Wuxuu ahaa taliye ku xigeenkii Midowgii Maxaakiimta oo 2006-dii ka adkaaday isbeheysigii lagu magacaabi jiray [Isbahaysiga la dagaalanka Argagaxisada oo ay ku midaysanaayeen dagaal oogayaashii Muqdisho.
Waxaa uu ahaa ku xigenkii hogaamiyihii la dilay ee alshabaab Axmed Cabdi Godane, isagoo sidoo kale ahaa afhayeenkii ururkaas,
Mukhtaar oo dad badan ay u arkayeen nin xoogaa ka aragti dhow hogaamiyaasha kale ee ururkaasi ayaa waxaa uu isaga soo baxay sanadkii 2013-kii , wixii intaa ka dambeeyay isaga oo ay la socdaan dhalinyaro isaga taabacsan waxaa ay ku dhuumaalaysanayeen kaymaha gobalka Bakool isagoo aan dagaal la galin dowladda, ciidamada Itoobiya iyo waliba alshabaab ilaa iyo sanadkan 2017-ka.
Waxaa la sheegey in uu Rooboow uu ka qeybgalay shirkii Asmara ee la isugu geeyay siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo markii dambe dalka madax ka noqdey.
Mid ka mid ah wariyaasha ajnabiga ee la kulmay abuu Mansuur waxaa ay sheegeen in roobow uu mar yiri ”wax dhib ah kuma qabno Maraykanka , fiiri hadda adiga waxaad tahay Maraykan, in ka badan Isbuuc ayaan ku ilaalinaynaa laakin adiga ma dareemi kartid”
Dowladda Maraykanka ayaa sannadkii 2012-kii Rooboow ku dartay liiska dadka aadka loo doondoonayo, waxaana madixiisa la saaray abaalmarin dhan $5 milyan oo doolar oo la siinayo qofkii nolol iyo geeri ku keena ama bixiya xog horseedi karta in lasoo xiro.
Balse bishii lasoo dhaafay ayaa laga qaaday cunaqabatayntaasi, lammana bixinin wax faahfaahin ah sababta looga qaaday, balse waxaa la sheegey in arrintan ay ka dhalatay wadahadalo lala galay Rooboow, ayna shuruud u ahayd in uu dowladda kusoo biiro, kana laabto moowqifkiisii hore.
Maalmo kadib markii uu soo baxay warka ku saabsan cunaqabataynta Maraykanka ee laga qaaday, dagaalyahanada Alshabaab waxa ay bilaabeen abaabul dagaal oo ka dhan ah Rooboow, waxaana dhacay dhawr dagaal oo qaarkood qasaare uu ka dhashay.
Markii dambe dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ciidamo u dirtey meelihii uu joogay Abuu Mansuur Rooboow, gacana ka siiyay in uu iska caabiyo Alshabaab.
Wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Mudane Cabdirishiid ayaa u safray magaalada Xuduru ee gobolka Bakool, halkaasi oo ay yimaadeen Abuu Mansuur iyo Ciidamadiisa.
Rooboow waxaa loosoo duuliyey magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu wadahadalo kula leeyahay madaxda ugu saraysa dowladda Federaalka, waxaana maalmaha soo socda la ogaan doonaa sida laga yeelayo aayihiisa.
Dowladda faa’ido ma u tahay isa soo dhiibitaanka Roobow?
Isa soo dhiibitaanka Abuu Mansuur Rooboow waa guul weyn oo usoo hoyatay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waana jab weyn oo oo gaaray Alshabaab.
Waxa uu ka mid noqonayaa hoggaamiyeyaashii muhiimka ahaa ee Alshabaab ee ama la diley, isa soo dhiibey ama la hayo laga soo bilaabi hogaamiyihii koowaad Aadan Xaashi Cayroow, waxaana aad u yar shaqsiyaadka muhiimka ah ee la sheegi karo ee hadda ku haray Alshabaab marka laga reebo amiirka hadda u taliya.
Laakiin ciddina kuma doodi karto in Alshabaab ay baaba’day, wali wax aka tirsan kumanaan dhalinyaro dagaalyahano ah, waxayna awood u leeyihiin in ay qaraxyo iyo waliba weeraro ka geystaan magaalooyinka waaweyn ee dalka.
Waxa ay wali haystaan gobolka Jubbada Dhexe oo dhan iyo degmooyin dhawr oo ka tirsan Jubbada Hoose, Gobolada Dhexe iyo meelo kale oo dalka ka tirsan.
Balse awoodooda sii wiiqmaysa iyo dadaalka ay dowladda ku jirto ee ay ciidamada ku dhiseyso ayaa muujin kara in hadda loosoo dhowaaday dhammaadka jiritaanka
Haddaba Xaaladda Mukhtaar ayaan wali la ogayn halka ay ku dhammaan doonto, ma laga yaabaa in hadii uu ka tanasulo Fikirkiisa al-shabaab uu boos ka helo dowladda Dhexe ee Soomaaliya mise waxaa laga yaabaa inuu maro waddadii Sheekh Xasan Daahir Aways
Previous articleMadaxwaynaha Hirshabelle oo kalsoonida lagala laabtay
Next articleRW ku xigeenkii hore ee Soomaaliya oo geeriyooday